Homeसमाचारविवाहपछि युवतीमा किन आउँछ यस्तो परिवर्तन जान्नुहोस्
October 16, 2020 admin समाचार 7915
विवा’ह यस्तो बन्धन हो जस’मा युवतीले आफ्नो घर छो’डेर नयाँ घरमा बस्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ घरको चाल चलन सबैलाई अप’नाउनु पर्ने हुन्छ ।महिलाले विवा’हसँग घर मात्रै परिवर्तन गरेका हुँ’दैनन् सम्ब’न्ध पनि परिवर्त’न भएका हुन्छन् ।
छोरी’बाट बुहारी बनेका हुन्छन् । नयाँ प’रिवेशमा नयाँ चु’नौतीको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ । तर तपाईला’ई थाहा छ छोरी या युवती’बाट बुहारी बनेपछि महिला’मा के परिवर्तन आउँछ । जे सुकै परिवर्तन आएपनि त्यसको सका’रात्मक वा नकारा’त्मक प्रभाव पतिलाई पर्छ । के के परिवर्त’न आउँछ त विवा’हपछि युवतीमा ?
विवाह भन्दा पहिला युवतीह’रुले आफ्नो फिगरला’ई विशेष ध्यान दिने गरका हुन्छन् । राम्रो फिग’रका लागि खानपा’नमा पनि विशेष ध्यान दिएका हुन्छन् । तर विवाह पछि उनीह’रुको ध्यान अन्तै केन्द्रित हुन जान्छ । उनीहरु वि’वाह भन्दा पहिला शरी’रलाई स्फूर्त राख्नका लागि निकै मिहेन’त गर्छन् तर विवाह पछि कस’लाई देखाउनु छ र ? भन्दै वे’वास्ता गर्छन् ।
विवाह भन्दा प’हिला घरमा सबै काम गर्ने युवती वि:वाह गरेपछि केही अल्छि हुन्छन् । उनीह’रुको लागि विवाह गरेर गएको घरमा काम गर्ने मानिस’को सहाय’ता चाहिनेसमेत हुन जान्छ ।
विवाह भन्दा पहिला घराय’सी खर्चमा कुनै वास्ता नराख्ने युवती विवाह गरेर गएपछि भने आर्थिक कारोबा’रमा सक्रिय बन्न खोज्छन् । विवाह भन्दा पहिला बैंक’मा खाता नहुने र खोल्ने आव:श्यकता नठान्नेहरुले समेत विवाह पछि बैंक’मा खाता खोल्छन् भने घरा’यसी हिसा’बकितामा पनि सक्रिय’ता जनाउँछन् । कसले कति खर्च गरो वा किन गरो, पति’लाई खर्च विवरण माग्ने लगाय’तका काम गर्छन् ।
विवाह भन्दा पहिला कतै गएको बेला’मा आमाले फोन गरेमा झ’र्कने छोरीले विवाह गरेपछि आमालाई आफैं फोन गर्छन् भने आमाको फोनको प्रति’क्षा गर्छन् । विवाहपछि आमाला’ई धेरै महत्व दिने र विवाह गरेर गएको घरको आ’मा(सासू) र परिवारलाई कम म’हत्व दिने भएका कारण पनि कयौं घरह’रुमा विवाद हुने गरेको छ ।
नन्द जेठानी’सँगको प्रतिस्पर्धा
विवाह भन्दा पहिला बहिनी वा भाउ’जु वा अरुले के लगाए वा के किने भन्ने कुरामा युव’तीको खासै चासो रहँदैन । आफू’लाई मन परेको र मर्जी अनुसार’का कपडा र अन्य गरगहना’मा चासो राखेका हुन्छन् तर विवाह गरेर गएपछि नन्द वा जेठा’नीसँग प्रतिस्प’र्धा शुरु हुन्छ । कपडा, स्टाटस फेसन लगायत हरेकमा नन्द जेठानीसँगको प्रतिस्प’र्धा शुरु हुन्छ । नन्दले वा जे’ठानीले यसो गरिसकी भन्दै उनीहरु’को मन शान्त रहन सक्दैन ।
सु’खी पत्नी र दुखी पति
विवाहभ’न्दा पहिला पुरुषको मन पर्ने बानी पनि विवाह पछि युव’तीलाई मन पर्न छोड्छ । विवाह गरेर गएपछि युवती’का लागि आफ्नो भाइ संसारकै सबैभ’न्दा दुखी पति लाग्छ भने बहिनी, जेठानी र नन्द जस्ता महिला सबै भन्दा सुखी लाग्छ ।
प’हिला जस्तो छैन
हरेक युवतीले विवाह पछि गुना’सो गर्छन् । विशेषगरि पति’समक्ष उनीहरुको गुना’सो हुन्छ । तपाई पहि’लाको जस्तो हुनुहुन्न । फेरिनुभयो जस्तो शव्द उनीहरुको निय’मित बन्न जान्छ । विवाह पछि पनि व्यक्ति वा पुरुष पहिला’को जस्तै कसरी रहन सक्छ र ?
भन्नेचाहिँ उनीहरुले सोच्दै’नन् । त्यस्तै पुरुषले पनि युवती’माथि सोच्ने गर्छ । महिला र पुरुष दुवै स्व’तन्त्र भएको बेलाको जस्तो हुँदैनन् । पारिवा’रिक झमेला, सम्बन्ध र जिम्मे’वारीले गर्दा सबै परिवर्त’न हुन्छन् भन्ने दुबै पति र पत्नीले बुझ्ने हो भने सम’स्या नै पर्दैन । -खाबरहब बाट
April 4, 2021 admin समाचार 3400
September 12, 2020 admin समाचार 11904
August 24, 2020 admin समाचार 16537